Fivavahana ao Gabôna - Wikipedia
Fiangonana katôlikan' i Donguila any Ntoum
Ny fivavahana ao Gabôna dia anjakan' ny kristianisma, indrindra ny katôlisisma. Ny 75 %n' ny Gabôney dia Kristiana fa ny 11 % kosa manaraka ny fivavahan-drazana animista ary ny 10 % Miozolmana. Miantraika amin' ny fivavahana kristiana sy silamo ao Gabôna anefa ny fivavahan-drazana. Maro ny Gabôney izay mampifangaro ny kristianisma sy ny fivavahan-drazana. Miaro ny fahalalahan' ny fivavahana ny Lalàm-panorenana gabôney ary amin' ny ankapobeny dia manaja izany zo izany ny fitondram-panjakana.
1 Ny fivavahan-drazana
1.1 Ny fivavahana boity
1.2 Ny fivavahan-drazana hafa
2 Ny kristianisma
2.1 Tantaran' ny kristianisma ao Gabôna
3 Ny silamo
4 Ny fivavahana sy fikambanana hafa
Manakaiky ny 79 %n' ny mponina ao Gabôna no kristiana ka ny 53 % amin' izany dia Katôlika.
Tantaran' ny kristianisma ao Gabôna[hanova | hanova ny fango]
Tonga tao Gabôna tamin' ny taonjato faha-16 tamin' ny alalan' ny Pôrtogey ny fivavahana kristiana. Ny frera italiana, atao amin' ny teny italiana hoe Frati Minori Cappuccini (frantsay: Frères mineurs capucins), no nametraka ny misiona kristiana tamin' ny taonjato faha-17. Nitsahatra tamin' ny taonjato faha-18, ary nandroaka ny frera italiana ny fanjakana pôrtogey tamin' ny taona 1777. Tonga tao Gabôna tamin' ny tenantenan'ny taonjato faha-19 ny misiona vavao toy ny Missionnaires du Sacré-Coeur sy ny Congrégation du Saint-Esprit (na Spiritains) sy ny misiona prôtestanta avy any Eorôpa. Ny katôlisisma dia niorina tao Gabôna niaraka tamin' ny fanjanahan-tany pôrtogey tamin' ny taonjato faha-18, sady nitombo ka lasa maro anisa indrindra ao Gabôna tamin' ireo taona 1900. Tamin' ny fanombojahan' ny fanjanahan-tany frantsay dia tonga ny misiona avy any Paris teo anelanelan' ireo taona 1890 sy 1960. Tamin' ny fiantombohan' ny tenantenan' ny taonjato faha-20 no nitomboan' ny fivavahana ara-pilazantsara. Tamin' ny taona 2016 dia tafatsangana ara-panjakana ny Fangonana ôrtôdôksa sady niorina ny trano fiangonana ôrtôdôksa tao Libreville.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_ao_Gabôna&oldid=1039052"
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 13:49 ity pejy ity.